प्रतिबन्धपछि विप्लवको पहिलो नेपाल बन्द : कतै शक्तिशाली बम, कतै खाली बोतल, कहाँ के भयो ?
Thursday, 14 Mar, 2019 1:58 PM
३० फागुन, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको बन्दका कारण देशभरको जनजीवन आंशिक प्रभाव परेको छ । बन्दको कार्यक्रम पूर्वघोषित भए पनि दुई दिनअघिमात्रै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण विप्लवको बिहीबारको बन्दलाई राज्यदेखि आम जनमानसले चासोसाथ नियालीरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा बन्दको प्रभाव आंशिक परेको छ । कुनै घटना भएका छैनन्, सवारी साधनहरु सामान्य रुपमा चलिरहेका छन् । स्कूल–कलेजहरु भने बन्द छन् । यस्तै, जिल्लाहरुमा त्रास फैलाउन बिभिन्न ठाउँमा बम तथा शंकास्पद बस्तु राखिएको भेटिएको छ । कहाँ के भयो ?
कैलालीमा जन्ती बोकेको बसमा आगजनी
विप्लवका कार्यकर्ताले कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकास्थित जंगलमा जन्ती बोकेको बसमा आगो लगाइदिएका छन् । गौरीगंगा नगरपालिका–८ हसुलिया चोक र राजीपुर जंगलको बीचमा भजनी नगरपालिका–१ बजारमा बिहे सकेर महेन्द्रनगरतर्फ फर्कदै गरेको म१ख ४४१ नम्बरको बसमा आगो लगाइएका हुन् । ८–९ जनाको समूहले सडकमा रुख ढालेर अवरोध गरी बिहान पौने ४ बजेतिर जन्ती ओरालेर बसमा आगो लगाएका हुन् । ‘आज बन्द हो भन्ने थाहा छैन’ भन्दै जवर्जस्ती बसमा रहेका व्यक्तिहरुलाई झर्न लगाई उनीहरुले बसमा आगो लगाएका प्रत्यक्षदर्शीले बताए । यसैबीच, बसमा आगजनी गरेको आशंकामा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । कैलाली गोदावरी नगरपालिका–४ गोदावरी स्थित पहाडबाट तराईतर्फ जाँदै गरेका सवारी साधनहरू रोकेर जलाई दिन्छौ भन्ने तीन जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा कंचनपुर बेतकोट नगरपालिका–२ दैजी बस्ने ३३ वर्षका कोषराज भट्ट, कंचनपुर भिमदत्त नगरपालिका–५ कटान बस्ने २२ वर्षका शुशिल चन्द र डोटी बिपिनगर ७ बस्ने १८ वर्षका धनबहादुर बम रहेको प्रहरी उपरीक्षक आभुषण तिम्सिनाले जानकारी दिए ।
उदयुरको कटारीमा बम
उदयपुरको कटारी नगरपालिका–२ देवीधापस्थित सडकमा बम भेटिएको छ । मारुती सिमेन्ट उद्योगलाई कच्चा पर्दाथ सप्लाई गर्ने शिवम मल्टिर्पस प्रालिको गेटे अगाडि बम फेला परेको इलाक प्रहरी कार्यालय कटारीले जनाएको छ । बम डिस्पोजको लागि नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीलाई खबर गरिएको प्रहरी निरीक्षक ललनप्रसाद कुर्मीले बताए । यसैबीच, बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले आज आव्हान गरेको बन्दको कारण उदयपुरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । बन्दका कारण सदरमुकाम गाईघाटलगायत कटारी, वेल्टार, रामपुरलगायतका स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएको लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेको छैन ।
नेपालगञ्जमा सकेट बम, सेनाले निष्क्रिय पार्यो
नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडक खण्डको राँझाचोक नजिकै अज्ञात समूहले राखेको बम नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ । बुधबार राति राखिएको बमलाई नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बिहीबार बिहान डिस्पोज गरेको थियो । नेपाली सेनाले त्यसलाई ‘बकेट बम’ भनेको छ । सडकछेउमा बम देखिएपछि त्यस क्षेत्रको जनजीवन त्रसित बनेको थियो । नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडक नेपालगञ्ज भित्रिने र बाहिरिने सडक हो । चारलेनको सडकछेउमा बम राखेपछि यातायात प्रभावित भएको थियो । नेपालगञ्जमा बन्दको प्रभाव आंशिक परेको छ । शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । लामो दूरीका सवारी साधन चलेका छैनन् । छोटो दूरीका सवारी साधन चलेका छन् । बजारहरु खुलेका छन् । बाँके प्रहरीले अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा सतर्कता अपनाएको जनाएको छ ।
दाङमा बम भनिएको बस्तु खाली बोतल
कागजले बेरिएको बस्तु भेटिएपछि हल्ला खल्ला भयो । बम हुन सक्ने भन्दै प्रहरीलाई खबर गरियो । घटना स्थलमा प्रहरी पुग्यो । तुलसीपुर स्थित विपि चोकको अनुपकुमार श्रेष्ठको घर अगाडि र वीरेन्द्र चोकको पश्चिम तर्फ भेटिएको शंकास्पद बस्तु खाली बोतल भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्लाष्टिकले बेरिएको बस्तुहरुलाई पातुखोलामा लगेर हेर्दा खाली बोतल रहेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी, प्युठानका दुई स्थानमा बम जस्तै देखिने शंकास्पद बस्तु फेला परेपछि नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको छ । त्यसैगरी रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका ५ मा प्लाष्टिकमा पोको पारेर राखेको अवस्थामा भेटिएको शंकास्पद बस्तु पनि डिस्पोज गरिएकोछ ।
बाजुरामा बिभिन्न ठाउँमा शंकास्पद वस्तु भेटिए
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाको डाब बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक उद्धप सिंह भाटका अनुसार कपडामा केही बेरेर बमजस्तो देखीने वस्तु सडकमा भेटिएको भन्ने खबर अनुसार आफु उक्त स्थलतर्फ जाँदै गरेको उनले बताए । बन्दको कारण बिहानैदेखि सदरमुकामबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दुरीका यातायात साधन चल्न नसकेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख केदार रजौलेले बिहान यातायातका साधन नछुटेपनि रात्रि बसहरुलाई स्कर्टिङ गरेर गन्तव्य तर्फ पठाइएको बताए । बन्दलाई लक्षित गरेर विभिन्न ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पाल्पामा बन्दको पूर्ण असर
पाल्पामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको असर पूर्णरुपमा परेको छ । सदरमुकाम तानसेनसहित अन्य बजार क्षेत्रहरुमा समेत बिहानैबाट सवारी साधन चलेको छैन् । अत्यावश्क बाहेक लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन नचल्दा यात्रुले सास्ती पाएका छन् ।
प्यूठानमा दुई स्थानमा संकास्पद वस्तु फेला
प्यूठानका दुई स्थानमा संस्कास्पद वस्तु फेला परेको छ । माण्डवी गाउँपालिका–३ देविस्थान र स्वर्गद्धारी नगरपालिका ४ भिग्रीमा संस्कासपपद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी निर्मण बुढाथोकीले जानकारी दिए । प्रहरीले विहान ४ः३० बजे सडक निगरानीको क्रममा उक्त संस्कासपद वस्तु भेटाएको थियो ।
अछाममा बन्दले यात्रु मारमा
अछाममा बन्दका कारण बिहानैदेखि मुख्य सडकहरुमा गाडी चल्न सकेका छैनन् । सदरमुकामदेखि गाउँ जाने ग्रामीण सडकको विभिन्न स्थानहरुमा विप्लवका कार्यक्रताहरुले विभिन्न ठाउँमा ढुङ्गा तथा रुख ढालेर सडक अवरुद्ध गरेका छन् । नेकपा जिल्ला इन्चार्ज शेरबहादुर विश्वकर्माका अनुसार अछाम सदरमुकाम मङ्लसेन र साफेबगरबाट गाउँ जाने कुनै सबारी साधन चल्न दिएको छैन। तर विद्यालय र अस्पतालमा भने कुनैपनी प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । बन्दको कारण मंगलसेन, साफे, विनायक, कमलबजार, बेलखेत र चौखुट्टेमा रोकिएका यात्रुहरू समस्यामा परेका छन । बन्दलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाभर व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रहरी निरीक्षक कलेन्द्र बिक्रम शाहीले बताए ।
गुल्मीमा विद्यालय र बजार पूर्णरुपमा बन्द
गुल्मीमा पनि जनजीवन प्रभावित बनेको छ । गुल्मीका बजार र विद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द रहेका छन् । जिल्लाबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन बसपार्कमै रोकिएका छन् । सेवाग्राहिहरुको उपस्थिती न्यून छ । जसका कारण सरकारी कार्यालयहरु पनि सुनसान रहेका छन् । बन्दकर्ता बजारमा नदेखिए पनि बन्दको प्रभाव भने रहेको छ । एसइई र विद्यालयका वार्षिक परीक्षा नजिकै आएको बेला बन्दले विद्यार्थीहरुको पढाई प्रभावित भएको अभिभावकको गुनासो रहेको छ । बन्दले कुनै पनि क्षति नहोस् भनेर जिल्लामा सुरक्षा व्यावस्था कडा बनाइएको प्रजिअ यदुनाथ पौडेलले बताए ।
बुटवलमा सडकमै शक्तिशाली बम, सेनाले डिस्पोट गर्यो
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवलको कालीकानगरमा बाल्टीमा कालो प्लाटिकले बेरेर राखिएको बम डिस्पोज गरेको छ । बुटवल—भैरहवा सडक खण्डको कालीकानगरमा स्पिड ब्रेकरमा राखिएको बम ‘इन्प्रोभाइस एक्सप्लोसिभ डिभाइस’ (बम) भएको डिस्पोजका क्रममा पत्ता लागेको छ । नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले विष्फोट गर्दा निकै ठूलो आवाज आएकाले उक्त वस्तु शक्तिशाली बम भएको पुष्टि भएको प्रहरी निरीक्षक हेमबहादुर केसीले जानकारी दिए । प्रहरीले बेलैमा सेनाको टोलीबाट डिस्पोज गराएकाले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको प्रहरी निरीक्षक केसीले बताए ।
गोरखाका दुई स्थानमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ । गोरखा नगरपालिका–६, भीआईपी टोल र वडा नम्बर १० को बाह्रकिलोमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको हो । गोरखाका प्रहरी प्रमुख एसपी भोला रावलले भने २ स्थानमा भेटिएका शंकास्पद वस्तु पोखराबाट आएको नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको जानकारी दिए । शंकास्पद वस्तु फेला परेसँगै प्रहरीले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारेको छ ।